Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Venice hadda waxay dalxiisayaasha ka qaadeysaa khidmadda gelitaanka
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Venice waxay bixisay lacag -bixinno dib -u -noqosho ah
Venice lacag bixintu waxay dib u soo celisaa dalxiisayaasha si ay u soo galaan magaalada. Xad -dhaafka dalxiisayaasha, in kasta oo ku dhawaad ​​guud ahaan maqnaanshaha qulqulka dibedda, ayaa sidoo kale lagu gartaa xagaagan Venetian.
Iyaga oo ka fikiraya qulqulka dalxiisayaasha sanadka soo socda, Venice waxay dib u soo celin doontaa gawaarida rogayaasha si ay dalxiisayaashu ugu baahan doonaan inay lacag bixiyaan si ay u soo galaan magaalada.
Xaaladda isbeddelka ayaa la ciyaaray 2018 laakiin ma aysan guuleysan oo dadka deggan ayaa buuq galay.
Wareegyada cusub waxay lahaan doonaan akhristayaal indhaha ah oo dadka deggan, ardayda, iyo shaqaaluhu ay ku yeelan doonaan furaha dalwaddu taleefannadooda si ay u helaan bilaash.
Go'aanka in muddo ah hawada ka soo laalaada ayaa hadda la soo rogi doonaa si loo xakameeyo tirada dalxiisayaasha booqda Venice.
Duqa Venice Luigi Brugnaro
Horeba sanadka soo socda, 2022, caasimada Venetian waxay jidadkeeda saari doontaa taxane taxane ah oo ay ku rakiban yihiin akhristayaasha indhaha, kuwaas oo aad uga farsamo sarreeya albaabbada aad adigu samaysatay ee la tijaabiyay 2018, kaas oo kaliya kuwa ballansadey booqashada goobta ama joogitaanka xarun hoy ayaa soo geli karta.
Waxa kale oo jiri doona khidmadda gelitaanka 10 euro oo la bixin doono. Deganeyaasha, rakaabka, iyo qeybaha kale waa laga dhaafi doonaa canshuurta. Hadafku waa in laga fogaado ciriiriga dalxiiska taasi waa xitaa ka sii badan oo la filayo COVID.
"Waxaan go'aansan doonnaa iyadoo ku saleysan tikniyoolajiyadda, [oo] waxaan dooran doonnaa meesha aan gelinno," ayuu yiri maamulka uu hoggaaminayo Duqa Venice Luigi Brugnaro, isagoo raaciyay, "Bishii Juun, muujinta xiisaha xulashada albaabada ugu fiican, waxaa jira afar shirkadaha diyaar u ah inay soo bandhigaan mashaariicdooda. ”
Imtixaannada ugu horreeya waxay bilaaban doonaan Sebtember. Waxaa lagu soo bandhigi doonaa jasiiradda Tronchetto, oo saldhig u ah xafiiska guud ee booliiska maxalliga ah iyo meesha qolka kontoroolka caqliga leh uu ka dhaco.
Deganeyaasha, shaqaalaha iyo ardayda maalin kasta u safarta magaalada waxay awoodi doonaan inay soo galaan iyagoo ku mahadsan furaha dalwaddu ee taleefannadooda. Dalxiisayaasha, waa inay hore u sii ballansadaan meelaha haray, ka dibna iska eegaan nooc ka mid ah tigidhada si ay u galaan mid ka mid ah goobahan laga soo galo.
Bishii Juun, Wasiirka Caafimaadka Talyaaniga Roberto Speranza wuxuu ku dhawaaqay in Talyaanigu u oggolaan doono dadka Mareykanka inay ku soo galaan dalka iyagoo la mid ah shuruudaha Shahaadada Cagaaran ee Midowga Yurub. Taas macnaheedu waa socdaalayaasha Mareykanka ee tusi kara midkood caddaynta tallaalka, shahaadada ka-soo-kabashada COVID-19, ama tijaabada PCR- ama tijaabada degdegga ah ee antigen-ka oo la qaaday 48 saacadood gudahood markay yimaadeen ayaa u safri kara waddanka Mediterranean-ka iyadoon la karantiilin marka ay yimaadaan.
Joanne wuxuu leeyahay,
Ogosto 24, 2021 markay tahay 06:34
OMG..Venice runtii waa Disneyland -ka cusub !!!